နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ပေါက်တတ်ကရ အိတ်တီ့ အပိုင်း(၈)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:33 AM
khin oo may December 8, 2008 at 1:41 AM
Ko Boyz December 8, 2008 at 1:56 AM
khin oo may December 8, 2008 at 2:00 AM
နားလည်မှူလွဲသွားတာပါ. ပထမဆုံးလာကြည်င့်္တာ ဘာမှ မရှီဘဲ. (ဒီစာသားကို select လုပ်ရွေ့ရေးပါ )ဆိုတဲ့တစ်ကြောင်းဘဲ ပေါ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အဲဒါ ကို Publish လုပ်တယ် ထင်လို့ပါ။
အခုမှ စာသားတွေ ပေါ်လာပါတယ်။ တောင်းပန်ပါသည်။
TZA December 8, 2008 at 9:24 AM
ထိုင်ဝမ်သည် နိုင်ငံမဟုတ်ပါ၊ နောက်ပြီး Jet Li ဖြစ်ပါတယ်၊ Lit မဟုတ်ပါ။
လူသတ်မှုကြောင့်မဟုတ်ပဲ အိုဂျေကို အခုချမှတ်လိုက်တဲ့ စီရင်ချက်က las vegas မှာ ဒမြတိုက်မှုကြောင့်ပါ။
ဟဲဟဲ၊ ကိုဘွိုက်ဇ်ကို မျက်လုံးဒေါက်ထောက်ကြည့်နေပါတယ်။
TZA December 8, 2008 at 9:25 AM
ပြစ်မှုမြောက်ခဲ့ဘူး အစား ပြစ်မှုမမြောက်ခဲ့ဘူး ဟု ဖတ်ပေးပါရန်။
khin oo may December 8, 2008 at 11:17 AM
Ko Boyz December 8, 2008 at 11:21 AM
- အိုဂျေကို ယိုးဒယားရောက်တုန်းက သူလူသတ်မှုကြောင့် ထွက်ပြေးတာကို ဟိုင်းဝေးမျာ ရဲတွေ လိုက်ဖမ်းတာ လိုက်ဖ်ပြကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ။ ရုပ်ရှင်ထဲကလို စိန်ပြေးတမ်း.. ကားတွေနဲ့...။ သဲထိတ်ရင်ဖိုဗျား...။
- အဲဒီတုန်းကလဲ သူ့ကို တရားရုံးကနေ စစ်နေတာ တော်ရုံ မပြီးသေးတာနဲ့ အသေအချာ မသိလိုက်ဘူး။
- ခု သူ့ကို ထောင်ချလိုက်ပြီဆိုတော့ အမှု ခိုင်လုံလို့ ဆိုပြီး ထင်နေတာ...။ လက်စသတ်တော့ ကိုယ်တော်ချောက နောက်တစ်မှုကိုး...။
- သူ့ရည်းစားဟောင်းကို သူသတ်တာ သေချာပေမဲ့ သက်သေ မခိုင်လုံတော့ လွတ်လိုက်ရတယ်...။
:P December 8, 2008 at 11:41 AM
Basic မရှိပါဘူး... ၀င်မပြောတော့ဘူး :(
Ko Boyz December 8, 2008 at 7:20 PM
ဒီလိုပဲ... ဘေ့စစ် မရှိရင် ဘာပြောမှန်း မသိနိုင်ကြတော့ဘူး...။
ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လိုက်လို့ ရပါတယ်...။ ဆင်ဒဏ်လားရယ်...။ အဲငှယ်...။